गणतन्त्रमाथिको अविश्वासले जाग्दैछ राजतन्त्रको वायु – Chitwan Post
गणतन्त्रमाथिको अविश्वासले जाग्दैछ राजतन्त्रको वायु
नेपालमा अब राजनीतिक अधिकारका नामका कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन आउन बाँकी छैन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गणतन्त्रभन्दा उत्तम राजनीतिक व्यवस्था अर्को हुनै सक्तैन । तर, हरेक व्यवस्था आफैँमा नराम्रा हुँदैनन् । त्यस व्यवस्थारुपी रथलाई हाँक्ने सारथि को हो भन्ने कुराले व्यवस्थाको प्रभावकारिता निर्धारणमा प्रमुख भूमिका खेल्छ । सिद्धान्तका आधारमा नै व्यवस्थाहरु निर्माण हुने हुन् र कुनै पनि सिद्धान्त आफैँमा नराम्रा हुँदैनन् । तर, पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलका नेताले जुन खालको चरित्र र राज्यसञ्चालनको तरिका अपनाए त्यसले जनतामाझ निराशा उत्पन्न गराएको छ । चियागफ, सामाजिक सञ्जाल हुँदै औपचारिक कार्यक्रमसम्मै राजतन्त्रै ठीक भन्ने आवाज बुलन्द हुँदै जानु निश्चय पनि गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि हितकर होइन ।
नेपाली जनता आफ्ना नेतागणबाट इमानदारिताको र विकासका योजनाको त्यति नै खोजी गरिरहेका छन् । आज जति जति गणतन्त्रका नायक भनाउँदाहरु असफल हुँदै र जनतामाझ अलोकप्रिय हुँदै जाने क्रम बढ्दो छ उति उति राजतन्त्र नै ठीक भन्ने सोच मन र मस्तिष्कमा चुलिँदै गएको छ । जनताको आफ्नै सरकारका रुपमा रहने गणतान्त्रिक शासनव्यवस्थाले निर्मला पन्त र अन्य चेलीबेटीको बलात्कार र निर्मम हत्या हुँदासमेत अपराधी पक्रन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु निश्चय नै सिङ्गो गणतन्त्रमाथिको अविश्वास जनमानसमा पैदा गर्नका लागि पर्याप्त छ ।
समयले जनताको चेतनाको तहमा जति परिवर्तन ल्याएको छ त्यसको आँकलनसम्म पनि गर्न नसक्नु नेतृत्वको असफलताको सूचक हो । सधैँ इतिहासको योगदानको ‘पेन्सन’का रुपमा शक्तिमा रहिरहन पाउँछु भन्ने भ्रम पालेर बसिरहने शीर्ष नेतृत्वले निरन्तर एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गइरहेको छ । राजनीतिमा होओस् या जीवनमा हरेक व्यक्ति आफ्नै कमजोरीका कारण असफल बन्ने हो । इतिहासमा वैयक्तिक कमजोरीका कारण ठूला–ठूला परिवर्तन परिणाममुखी बन्न सकेनन् । नेपालमा गणतन्त्र आउँदा सँगै बुई चढेर आएको संघीयताले नेपाली जनमानसमा जसरी उपस्थिति जनाएको छ त्यसले त जनतालाई एउटा राजा फालेको गल्तीका लागि हजार राजा भोग्नुपर्ने सजाय दिएझैँ प्रतीत हुन आएको छ ।
लुटतन्त्रको दोहोरो मापदण्डले गणतन्त्र जीवित रहँदैन । सधैँभरि कमजोर पात्रलाई शत्रु देखाएर आफ्नो आयु लम्ब्याउन सम्भव हुन्न । सामन्ती उत्पादन प्रणालीमै रमाएर बाँच्ने हो भने गणतन्त्रभन्दा कयौँ गुणा प्राकृतिक राजतन्त्र नै हुन्छ । वाम नेताहरुले गणतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् गरेर परिणाम दिन नसकेपछि अरुलाई दोष दिएर आफ्ना अपराधहरु लुकाउने कर्म बन्द गर्नुपर्छ । सत्ताधारीहरुको आफ्नै भ्रष्ट र अक्षमताले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । अन्यथा, नेपालमा पुनः राजा आउने कुनै राजनीतिक वातावरण छैन । यदि अवाञ्छित बाटोबाट राजतन्त्र पुनस्र्थािर्पत हुने हो भने पूर्वराजाले पनि इतिहासतिर फर्केर हेर्दा हुन्छ । दलहरुले भन्दा उनकै अप्राकृतिक हर्कतले नेपालमा गणतन्त्र आएको हो । इतिहासलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ, किनकि इतिहास निर्मम हुन्छ, उसले नेताले जस्तो राजा र जनतालाई अलग–अलग व्यवहार गर्दैन ।
विगतमा संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत बहुदलीय प्रजातन्त्रले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसक्दा नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गयो । त्यसको फाइदा उठाउँदै माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन आरम्भ भयो । र, उक्त आन्दोलन बढ्दै जाँदा त्यसको आवरणमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु समेत जोडिँदै गए । अन्ततः माओवादी आन्दोलनको अन्त्यका नाममा राजतन्त्र सक्रिय बनेर आयो । वर्तमान नेतृत्वले इतिहासको पाठ सिक्न चाहेको देखिन्न ।
अहिले पनि राजनीतिक परिघटनाको पुनरावृत्ति उस्तै किसिमले विकसित बनिरहेको देखिन्छ । वामपन्थीको बदनाम र असफल सरकार, कमजोर र अविश्वसनीय प्रतिपक्ष, नेत्र चन्दको हिंसात्मक आन्दोदन, नागरिकको चरम निराशा आदि घटना नियालेर हेर्ने हो भने परिस्थिति नकारात्मक दिशातिर गइरहेको छ । नागरिकको यही निराशा र असन्तोषलाई भजाएर शक्ति आर्जन गर्न खोज्ने अनेक समूहहरु मैदानमा देखा पर्नु अस्वाभाविक होइन । पूर्वराजा पनि यसमा अपवाद छैनन् । र, राजनीति र लोकतन्त्रलाई अग्रगामी दिशा प्रदान गर्न चाहने शक्तिहरुले सत्ताधारी र पूर्वराजाका गतिविधिलाई सन्देहपूर्ण आँखाले हेरिरहेका छन् ।
महेन्द्रको दोस्रो संस्करणका रुपमा अचानक उदाएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले पूरै बढारेर नागार्जुन पु¥याएर थन्को लगायो । राजतन्त्र सामन्ती व्यवस्थामा बाँच्ने संस्था हो । त्यसैले, राजतन्त्र पिछडिएको सामन्ती उत्पादन प्रणालीमा मात्र हुर्किंदै र मौलाउँदै जान्छ । नेपालमा सामन्ती उत्पादन प्रणालीमा केही फेरबदल हुनासाथ राजतन्त्र हुर्किने वातावरण कमजोर हुँदै गएकाले राजतन्त्र समाप्त भएको हो ।
राजतन्त्र राख्नु वा फाल्नु एउटा राजनीतिक दल वा नेताको इच्छा र चाहनाको कुरामात्रै होइन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने अहिलेका निर्णायक दलहरु कांग्रेस र कम्युनिस्टले २००७ सालअघिदेखि नै राजतन्त्र फाल्न चाहन्थे । तर, सम्भव भएन । किनकि नेपालको उत्पादन प्रणालीले जन्माएको राजनीतिक वातावरण राजतन्त्रका लागि अनुकूल थियो । त्यसैले, राजतन्त्र लामो अवधिसम्म बाँच्यो । त्यसो भए कतिपय विकसित मुलुकमा अहिले पनि राजतन्त्र किन जीवितै छन् ? जहाँ जहाँ लोकतन्त्र र राजतन्त्र सँगसँगै छन् त्यहाँ राजतन्त्र कुनै समस्याको विषय होइन । त्यहाँको राजतन्त्र मानार्थ राजतन्त्रमात्रै हो । सत्ताको चरित्र लोकतान्त्रिक हो, राजतन्त्रात्मक होइन ।
अर्को पाटो हो नागरिकको तहमा ओर्लिसकेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको । नरसंहारको सम्भावित अनुमानलाई गलत सावित गर्दै विश्व इतिहासमै अनुकरणीय बनेर अत्यन्त भद्र तरिकाले राजगद्दीबाट बहिर्र्गिमत भए । त्यही घटनाबाट उनको प्रशंसा सुरू भयो । गणतन्त्रले आत्मसात् गरेको संघीय शासनव्यवस्थामा एकपछि अर्को गर्दै नेतृत्वको असक्षमता प्रदर्शन गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउँदै जानु र पूर्वराजा चुपचाप भलादमी पाराले यदाकदा जनताका माझमा मुसुक्क मुस्कुराउँदै उपस्थित हुनु सधैँ अनिश्चित परिणाम निम्त्याउने नेपाली राजनीतिक परिवेशमा बहुत रहस्यमय परिस्थिति लाग्दछन् ।
नेपालमा पनि यदि लोकतान्त्रिक सत्ता र मानार्थ राजतन्त्र सँगैसँगै जान सक्ने भए ठूलो विवादको विषय हुँदैनथ्यो । तर, सम्भव छैन । यसलाई बुझ्न नेपालमा ३÷३ पटक परीक्षणमा रहेको संवैधानिक राजतन्त्र सक्रिय राजतन्त्रमा किन रुपान्तरण भयो भनेर बुझ्न जरूरी छ । किनकि, नेपालमा राजतन्त्रको प्रसंग आउनेबित्तिकै सक्रिय राजतन्त्रको चरित्रमा रुपान्तर भइहाल्छ । यहाँको उत्पादन प्रणाली र राज्यका औजारले मानार्थ राजतन्त्रलाई अनुशासनमा राख्न कदापि सक्दैन । सामन्ती उत्पादन प्रणालीमा हुर्किने गणतन्त्र र त्यसका नेताहरु पनि राजतन्त्रजस्तै अनुदार, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी हुन्छन् ।
त्यसैले, घोषितरुपमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्धबाट निसृत राज्यसत्ताको पक्षपोषण गर्ने दलहरुमा राजतन्त्रप्रति अहिले पनि सम्मोहन छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा (संयुक्त), शिवसेनाजस्ता ससाना दलहरुले अहिले पनि औपचारिकरुपमा राजतन्त्रको वकालत गर्छन् । तर, उनीहरुको आधार दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दैछ । किनकि, उनीहरुको राजतन्त्र सम्मोहनको आर्थिक र सामाजिक आधार कमजोर छ ।
वर्तमान सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरुभित्र रहेका केही नेताहरुमा पनि राजतन्त्रप्रति सम्मोहन देखिन्छ । तर, सम्मोहनका कारण भने नेतैपिच्छे फरक छन् । कतिपयले सैद्धान्तिक र भू–राजनीतिक कारणले साँच्चै नेपालमा राजतन्त्रको आवश्यकता देखेर, कतिपयले आफ्नै नेतृत्वसँग असन्तुष्ट भएर र कतिपयले विगतमा राजतन्त्रसँग जोडिएको फाइदाजनक विरासतबाट राजावादी सम्मोहनलाई जीवित राखेका छन् ।
अर्कोतिर, अहिले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न नसकेको सानो बौद्धिक जमातमा पनि राजतन्त्रको सम्मोहन जागेको छ । तर, यसको सम्मोहन नितान्त निजी अवसरवादबाट निसृत छ । नेपालको परिवर्तनमुखी आन्दोलनमा निरपेक्ष भूमिकामा रहेको यस्तो जमातले राजनीतिमा ‘स्पेस’ खोजेको छ । तर, कथित रुपमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुले उनीहरुलाई उचित स्थान दिन अस्वीकार गरेपछि उत्पन्न कुण्ठाबाट राजतन्त्रको वकालत गर्ने गरेका छन् । यो जमात राजतन्त्रप्रतिको सम्मोहनबाट आफ्नो परिचय स्थापित गर्न चाहन्छ । केही नेताहरुले गणतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा रुपान्तरण गरेपछि व्यक्तिगत मह¤वाकांक्षा बोकेको र पहिचानको संकटबाट गुज्रिएको यस्तो जमातले पूर्वराजाको फेरो समाएर र वर्तमान असन्तुष्टिलाई भजाएर नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेको छ । यस्तो जमात नेपाली समाज प्रतिगामी दिशातिर होइन, अझ गहिरो र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रतर्फ जान्छ भन्ने सहज ज्ञानको विरूद्ध छ । यसले समाजको निराशालाई समातेर अलिकति चर्चा त बटुल्छ । तर, समाज परिवर्तनको लामो र अग्रगामी बाटो पहिल्याउने धैर्य र रूचि दुवै राख्दैन ।
गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति कतै कुनै समारोहमा सवारी हुँदा यातायात ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुनु र पूर्वराजा निर्बाधरुपमा जनताका घरदैलोमा हिँड्ने क्रम जारी रहँदा गणतन्त्र मलिनो बन्दै जानु र राजतन्त्र थप उज्यालो बन्दै जानु अस्वाभाविक होइन । अर्कोतिर दुनियाँमा कतै नभएको जनप्रतिनिधिलाई राज्यले तलबको व्यवस्था गरेर जुन अराजनीतिक हर्कत देखाएको छ, यसले गणतन्त्रको प्रभावकारिता शून्यबाट झरेर ऋणात्मक दिशातिर ओर्लने पूर्वानुमान गर्न बाध्य बनाउँछ । राजनीति गर्नेले तलब बुझ्ने भएपछि यिनलाई कर्मचारीभन्दा माथिल्लो हैसियत कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ ? तलबी कर्मचारीले घूसखोरी र भ्रष्टाचार आकास छुने गरी बढाएको यो मुलुकमा जनप्रतिनिधि पनि तलबी बनेपछि भ्रष्टाचारको पारो कति चढ्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय नेतृत्वसम्मले जनताको ढाड सेकेर उठाएको करबाट पजेरो चढ्ने भएपछि देशमा जनताको स्तरमा विकास हुने कुरामा एकरत्ति पनि आशा रहँदैन । एकपछि अनेक काण्डमा दुई तिहाइनिकटको बलियो सरकार असफल बन्दै गएको यथार्थले जनता पुरानै बाटो फर्कने मनोविज्ञानमा नपुग्लान् भन्न सकिँदैन ।
राजनीतिक इतिहासमा जनता पुरानै बाटो फर्केका उदाहरण केही सफल युरोपेली राष्ट्रमा पनि पाइन्छ, यद्यपि यो प्रक्रिया त्यति सहज भने हुँदैन । बजारमा राजतन्त्रको वायु जनता तर्साउन सक्रिय हुनु र गणतान्त्रिक सरकार असफल हुनु संयोगमात्रै हो । सत्तरी वर्षको इतिहासमा ३÷३ पटक राजतन्त्रविरूद्ध संघर्ष गरेको मुलुकले अझै पनि राजाको ससानो गतिविधिबाट तर्सिने राजनीतिक वातावरण किन छ ? आफूलाई परिवर्तनको कित्तामा उभ्याएका नेताहरुले किन मुलुक परिवर्तन गर्न सकेनन् ? किन मुलुकका आधारभूत समस्या राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रले समेत समाधान गर्न सकेन ? भन्ने प्रश्नहरुको वरिपरि नेपालको राजनीति र नेतृत्वले विगत ७० वर्षदेखि चक्कर काटिरहेको मात्र छ । पृथ्वी नै फर्के पनि मृत भइसकेको राजतन्त्र फर्केर आउँदैन र आउनु पनि हुँदैन । तर, त्यो असम्भव सम्भावनालाई सम्भावितजस्तो बनाउँदै लैजाने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ गम्भीर बहस गर्न जरूरी छ ।
आफैँभित्र परिवर्तन नभईकन सिङ्गो देश परिवर्तन गर्न सकिँदैन, त्यसैले क्षमतावान् युवालाई कार्यपालिकाको जिम्मा लगाएर देश बनाउनका लागि इतिहासमा फेरि एकपटक शीर्ष नेतृत्वले त्याग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कार्यपालिका काम गर्ने निकाय हो, तसर्थ कार्यपालिकामा शारीरिक र मानसिकरुपमा अति सक्रिय युवाको दह्रो उपस्थिति आवश्यक छ । यसो हुन सकेमा राजनीतिबाट जनताले सेवासुविधा सहजै उपभोग गर्न पाउँछन् । जनतामा राजनीतिप्रति आशा पलाउँछ । अनि, राजतन्त्रको काँचो वायु लिएर जनता तर्साउन आउनेलाई जनताले लाठो लगाएर सिमाना कटाउँछन् । यसो हुन नसकेर अझै पनि राजतन्त्रको जीवनशून्य मन्त्र जप्दै हिँड्ने वातावरण बन्यो भने त्यो देश, जनता र राजनीतिक इतिहासकै लागि दुर्भाग्य सावित हुनेछ ।